Ngwọta iji zere ịhapụ ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Ngwọta iji zere ịhapụ ụgbọ ibu n'ịntanetị
Zere ịhapụ ụgbọ Ọ bụ otu n'ime nsogbu ndị siri ike maka ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ndị na-ahụ mbọ ha na-agba n'ịme ahịa na-ala n'iyi n'oge ikpeazụ.
Mana ịmata otu ị ga-esi zere ịhapụ ịgbahapụ ịntanetị, ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ ihe kpatara ndị ahịa anaghị emecha ihe ha zụtara.
1 Kedu ihe kpatara ndị ọrụ ji ahapụ ụgbọ ala ahụ
2 Ngwọta iji zere iji gbochie ndị ahịa ịhapụ ụgbọ ahụ na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
2.1 Ntughari dika usoro igwu egwu
2.2 Zere akwụ ụgwọ ndị ọzọ
2.3 Mee ka usoro ndebanye aha gị dị mfe
2.4 Nlele-apụ ga-aga agile
2.5 Gosi ogwe ọganihu
2.6 Oku na ime ihe agha gha adi ocha
2.7 Gụnyere ikike ịchekwa iwu ahụ
2.8 Ọ na-eji usoro nkwukọrịta na-eme ka onye ọrụ rụọ ọrụ
2.9 Machi nhọrọ na-abawanye ahịa
2.10 Tinye foto nke ngwaahịa ndị ahụ na ụgbọ ibu
2.11 Otu Pịa ịzụta
2.12 Zere ịtụnanya
2.13 Tinye ego na ọsọ nke eCommerce gị
2.14 Ihe Nguzobe Ndozi Na-enye Udo nke Uche
2.15 Mkpọtụrụ gị na peeji nke ibe na-enye obi ike
2.16 Nkata ma ọ bụ ekwentị mesikwuru ugwo peeji nke
2.17 Mepụta ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ
Kedu ihe kpatara ndị ọrụ ji ahapụ ụgbọ ala ahụ
Dị ka data ọ na-enye Statista ndị ọrụ hapụrụ ụgbọ ibu azụmahịa maka ihe dị iche iche:
56% n'ihi oge ụra na-atụghị anya ya
37% n'ihi na m na-eme nchọgharị
36% n'ihi na ha chọtara ọnụahịa ka mma
32% n'ihi na ọnụahịa ikpeazụ dị oke ọnụ
26% kpebiri na ha agaghị azụ
25% n'ihi na ịgagharị siri ike maka ha
24% n'amaghị na ibe
21% n'ihi oke ogologo usoro
18% maka oke ịkwụ ụgwọ nkwado
17% maka ntụkwasị obi nke nchekwa ịkwụ ụgwọ
16% n'ihi na ha lere nhọrọ mbufe iji ezughi oke
15% n'ihi oke oge ibu peeji
13% maka ọnụahịa na ego mba ọzọ
11% n'ihi na akwụghị ụgwọ ahụ
Ngwọta iji zere iji gbochie ndị ahịa ịhapụ ụgbọ ahụ na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
N'iburu ihe dị n'elu, ọ dị mfe ịchọpụta na enwere ike izere nnukwu akụkụ nke ihe kpatara ịgbahapụ. Agencylọ ọrụ na-ere ahịa Ndị Ahịa Ahịa Online na-enye ọtụtụ ihe ngwọta iji zere ndị a dara. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ha.
Ntughari dika usoro igwu egwu
Iweghachi ego na-adị irè iji merie ndị ahịa azụ. Site na izipu ozi email, ị nwere ike itinye kuki na IP onye ọrụ, ka ị wee hụ mgbasa ozi metụtara ngwaahịa ndị ha nwere mmasị na ya.
Zere akwụ ụgwọ ndị ọzọ
Ikpochapu ego ndi ozo bu ezigbo uzo iji zere nsogbu. Mbupu na-akwụ ụgwọ ọnụ yana ụgwọ ndị ọzọ na-egbochi usoro ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọzọ ị ga-etinye ma tinye ha, biko kọọrọ ha ozugbo enwere ike na usoro ndenye ọpụpụ.
Mee ka usoro ndebanye aha gị dị mfe
Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ịzụta site na eCommerce gị ga-edebanye aha iji banye, ha nwere ike ịpụ n'ihi ịdị umengwụ nke mezue ozi ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha ga-eme ya tupu ha ahụ ka ụgbọ ha si dị. Ọ bụrụ na ụdị azụmaahịa gị chọrọ ndebanye onye ọrụ, ezigbo nhọrọ bụ ịdebanye aha site na akaụntụ na Netwọk mmekọrịta.
Nlele-apụ ga-aga agile
Usoro ndenye ọpụpụ enweghị ike ịme ọtụtụ usoro. Yabụ, ịkwụ ụgwọ ahụ ga-adị gara gara ma dịkwa mfe. Dị ka o kwesịrị, ọ ga-ewere usoro 3-5.
Gosi ogwe ọganihu
Ọganihu na-emesi onye ọrụ ahụ obi ike. Onye ọrụ nwere ike ịda jụụ ma ọ bụrụ na ị gosi na ha na-aga n'ihu na usoro ịkwụ ụgwọ ha. Ma site na ozi ma ọ bụ na mmanya na-egosi pasent nke ọganihu.
na kpọọ ka eme ga-edo anya
na kpọọ ka eme ha dịkwa mkpa na ụgbọ ibu azụmahịa. Gwa onye ọrụ ihe ọ ga - eme ga - enyere ha aka n'okporo ụzọ ịzụta.
Gụnyere ikike ịchekwa iwu ahụ
A na-ejikarị ụgbọ ala dị ka ndepụta chọrọ. ^ Yabụ, ịchekwa usoro ga-enyere aka weghachite ya ozugbo ịchọrọ ma mezue nlele.
Ọ na-eji usoro nkwukọrịta na-eme ka onye ọrụ rụọ ọrụ
Mkparịta ụka mmekọrịta na-arụ ọrụ nke ọma maka onye ahịa iji zụọ ihe. Formsdị ndị ahụ dị oyi ma bụrụ ndị na-abụghị onye mana ozi dị mkpirikpi na-enyere aka igosipụta ọmịiko: "Bịanụ, iwu gị fọrọ nke nta ka ọ gawa" ma ọ bụ "Obere ihe ọmụma ebe a na iwu ahụ ga-aga." Ha bụ ozi dị mkpirikpi na mkparịta ụka ga-eme ka ahụmịhe dị ụtọ karị maka onye ọrụ.
Machi nhọrọ na-abawanye ahịa
Njikọ ndị dị na peeji ịzụ ahịa abụghị ezigbo echiche. Ọ bụrụ na ị dọpụ onye ọrụ ma ọ bụ jụọ ya, ọnụego ịgbahapụ gị ga-eto. Dịka ọmụmaatụ, ịgbakwunye ngwaahịa ndị metụtara ya tupu ịmechaa ịzụta ahụ mere ka onye ọrụ ahụ pụọ iji nyochaa nhọrọ ndị ọzọ. Na njedebe, ịchụsasị ibe na ibe ọzọ ga - eme ka ị pụọ apụ n’enweghị azụrụ ihe ọ bụla.
Tinye foto nke ngwaahịa ndị ahụ na ụgbọ ibu
Mgbe ndị ọrụ tinye ngwaahịa na ụgbọ ahụ, ha ejighi n'aka ma ihe ha chọrọ so n'ezie. Gụnyere onyonyo thumbnail nke isiokwu a ga - enye onye ọrụ nchekwa ka ukwuu. Mepụta ahụmịhe ọhụụ na ị ga-eme ka onye ọrụ na-arụsi ọrụ ike n'oge usoro ịzụta.
Otu Pịa ịzụta
Nnukwu onye na-eme ihe ọjọọ na ndị ọrụ chọrọ ịzụta ngwa ngwa na ngwa ngwa bụ Amazon: site na usoro ndebanye aha ya, onye ọrụ nwere ike ịzụta ngwaahịa naanị otu ịpị; enweghị mkpebi ma ọ bụ oge iji chee echiche nke ukwuu ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ ka ịchọrọ. Ọ bụrụ na azụmahịa gị anaghị achọ ndebanye onye ọrụ, ị gaghị enwe ike itinye usoro a.
Ozi ọ bụla nke ozi a na-atụghị anya ya na-eme ka ọnụ ọgụgụ agbahapụ. Ihe ịtụnanya n'oge usoro ịzụta bụ nnukwu nsogbu iji mezue ịkwụ ụgwọ ahụ. Onye ọrụ ahụ na-atụ ụjọ n'ihi na ọ ghaghị ijide n'aka ọtụtụ ihe: na nke a bụ ngwaahịa ọ chọrọ, na adreesị nnyefe ahụ bụ otu ma ọ bụ dị iche na adreesị ịgba ụgwọ, na iwu ahụ ga-abịa n'oge na-adịghị anya ... na n'etiti ndị niile na-ata ahụhụ na-egosi a mmapụta na-atụghị anya ozi; arịrịọ iji mejupụta coupon ego, ubi ezughị ezu ... Onye ọrụ ga-ahapụ jupụta. Ya mere, emela ka ị kwụsị ma hapụ ndị ahịa gị ka ha lekwasị anya na imecha zụọ ha.
Tinye ego na ọsọ nke eCommerce gị
Mgbe saịtị ahụ adịghị nwayọ, ndị ahịa na-aga na weebụsaịtị ọzọ. Ime saịtị gị ngwa ngwa ga - enyere aka belata ọnụego agbahapụ, yabụ gbaa mbọ hụ na peeji ịzụta gị kachasị ọsọ na saịtị ahụ niile.
Ihe Nguzobe Ndozi Na-enye Udo nke Uche
Ọ bụ maka ịgbakwunye SSL (Secure Sockets Layer) ma ọ bụ njikọ njikọ njikọ echedoro nke gosipụtara iji belata oke ọnụego agbahapụ. Onye ọrụ ahụ na-ahụ nchebe siri ike site na nke a ma chebe nchebe, ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ezigbo ego na uru bara uru nke bara uru ịgbakwunye na nhazi na mmemme nke weebụsaịtị gị.
Mkpọtụrụ gị na peeji nke ibe na-enye obi ike
Ihe ndị ọzọ na-enyere aka ịnweta ntụkwasị obi nke onye ọrụ: tinye ntinye na adreesị na data nke ụlọ ọrụ gị. Hụ na n’azụ ebe nrụọrụ weebụ ahụ, enwere adreesị anụ ahụ iji kpọtụrụ ma ọ bụ nwee ike ịbụ nnukwu ihe na-enyere onye ọrụ aka ịtụkwasị obi na weebụsaịtị gị karịa nke ọzọ.
Nkata ma ọ bụ ekwentị mesikwuru ugwo peeji nke
Nhọrọ nhọrọ nkwado ndị ahịa ị na-enye, ka ị ga-enwekwu ahịa. Usoro ịzụta ihe na-agbagwoju anya ma ọ bụ ndị ahịa na-enweghị nghọta nwere ike ịnwe nkwado na nlebara anya nkeonwe, ma ọ bụ site na nkata ma ọ bụ site na ekwentị.
Mepụta ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ
Amachila ịkwụ ụgwọ ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ibugo ngwaahịa gị karịa ma nye ọtụtụ ohere maka nzụta, ọ ga - enyere aka belata ọnụego agbahapụ.
Isi mmalite - ozi ecommerce
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ngwọta iji zere ịhapụ ụgbọ ibu n'ịntanetị
Club E-Commerce na-ahazi Summit Cross-Border 2015 na October 29 na 30